မောင်စိန်ဝင်း(စာရေးဆရာ) - မှတ်စုစာအုပ်
မွေးသက္ကရာဇ် ၁ဝ၊ ၅၊ ၁၉၅ဝ
မိဘအမည် ဦးထွန်းကြွယ် + ဒေါ်ချည်
မွေးဖွားရာဒေသ ပြည်ခရိုင်၊ ပုတီးကုန်း၊
၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လထုတ် ရုပ်ရှင်အောင်လံ မဂ္ဂဇင်း၌ ကဗျာ ရေးသား၍ စာပေနယ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ စက်မှု တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝတွင် ကဗျာ စာအုပ် ၃ အုပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေသည့် စက်မှု သတင်းစဉ်၊ စက်မှု တက္ကသိုလ် မဂ္ဂဇင်းများ အယ်ဒီတာ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
ရွှေသည် မဂ္ဂဇင်း ကဗျာ စာတည်းနှင့် အရိန္ဒမာ မဂ္ဂဇင်း ဦးစီး စီစဉ် ထုတ်ဝေသူ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြတ်မိခင် ဝတ္ထုတို ပြိုင်ပွဲ၊ ဝါမိုးအောင် ဝတ္ထုတို ပြိုင်ပွဲနှင့် အမေနေ့ဝတ္ထုတို ပြိုင်ပွဲများတွင် ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်ဖြင့် ယနေ့တိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
စက်မှု တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ အထိ အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် အမှု ထမ်းခဲ့ပြီး အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ယခုအခါ စာပေ ရေးသားခြင်း လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုကာ အမှတ် ၈/ဘီ၊ မြသီရိလမ်း၊ အေဝမ်းခြံ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရေးသား ခဲ့သော စာအုပ်များ
ချစ်သူဖတ်ဖို့ ရေးတဲ့စာ (ဆရာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်)
နှလုံးသားနံရံပေါ်က ပန်းချီကား၊ သမုဒယမြစ်ဖျားက အချစ်နွယ် (ကဗျာရှည်)
နံ့သာရွှေမှုံ ကဗျာများ (အေးငွေနှင့် တွဲလျက်ရှိ)
လက်ရွေးစင် ကဗျာများ (ပြင်ဦးလွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်)
ကြွေ …. ကြွေ …. ကြွေ ….
ဆယ်သက် ဆယ်ကမ္ဘာ ထင်တယ်ခင်
တပွင့်ကြွေ တပွင့်သစ် ပန်းဖြစ်လျှင်လည်း အကောင်းသား
တွယ်ငင်လို့ ယိမ်းနွယ်ပင်မို့ စိမ်းလေသလား
နှလုံးသား ရာဇဝင်မှာ စာတင်တဲ့ အလွမ်း
ပြန်ပြောချင်တဲ့ သံယောဇဉ်ဖွဲ့ စကားလေးတွေ
မုဆိုးစစ်စစ် မိန်းမမိုက်ကြီးရဲ့ ဖြစ်စဉ်
သူနမ်းလျှင် ပန်းပွင့်ဖြစ် သူပစ်တော့ ဝါရွက်ကြွေ
သံယောဇဉ် နွယ်မတင်းအောင် ငယ်စာရင်းကိုဖျက်
သံယောဇဉ် မြစ်ကျဉ်းရဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့လင်္ကာ
အကြွေပန်းပေမယ့် ရွှေနန်းတော့ ထိုက်ချင်တယ်
အချစ်ဦး အချစ်စ အချစ်လယ် အချစ်ဆုံး
အရွက်ခြွေ နွေတဲ့လား အပူသစ် အချစ်တဲ့လား
အလွမ်းရင့်တော့ ပန်းပွင့်လို့ ကြွေ
ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့က စုဆောင်း ပြုစုသော 'နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း' စာအုပ်၊(ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်) ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(ပထမ အကြိမ်)